दशैँ को मुख्मा एकासी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ? – Kavrepati
Home / आर्थिक / दशैँ को मुख्मा एकासी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
दशैँ को मुख्मा एकासी घट्यो सुनको मूल्य, तोलाको कति पुग्यो ?
admin 1 week ago	आर्थिक Leaveacomment 466 Views
दशैको मुखमा सुनको मुल्य एकासी ह्वात्तै घट्यो
काठमाडौं – सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । आइतबार प्रतितोला ९० हजार ७ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको छापावाल सुनको मूल्य आज घटेर तोलाको ९० हजार ६ सय रुपैयामा कारोबार भइरहेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ ।
अन्य समाचार : खुल्यो UAE को रोयल गार्ड, कसरी जाने..? काठमाडौं : युएई पुग्ने वा युएई पुगेका जो कोहिको एउटा सपना भनेको दुबईको रोयल गार्डमा काम गर्न पाउनु एक हो । आकर्षक तलब , राम्रो सुबिधा र सहज कामको कारण दुबईमा रहने वा दुबई जाने जो कोहिको लागि रोयल गार्डमा काम गर्ने सपना रहेको हुन्छ ।
रोयल गार्ड युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई) संगै कतार, न्यूजील्याण्ड, स्विट्जरल्याण्ड र साउदी अरब, युके जस्ता देशहरुमा प्रचलित छन् ।रोयाल गार्डमा हालका दिनमा भुपु सेना वा प्रहरी मात्रै होइन सर्वसाधारण समेतलाई लिने गरेको छ भने केहिले सैनिक तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेश समेत गर्ने गरेको जानकारहरु बताउछन् ।
युएईको लागि रोयल गार्डमा काम गर्न इच्छुक ब्यक्तिहरुले विभिन्न समयमा आउने माग पत्र अनुसार नेपालको मेनपावर कम्पनी मार्फत अन्तर्वार्ता दिनु पर्ने हुन्छ र त्यस्तो अन्तर्वार्ताको लागि युएईबाट नै सेलेक्सनको लागि प्रतिनिधि आउने गर्छन् भने युएईमा नै रहेका ब्यक्तिहरुले युएईमा रहेका एजेन्सीहरु मार्फत अप्लाइ गर्नु पर्ने हुन्छ ।दुबईमा रोयल गार्डको लागी आवश्यक योग्यता
१ पूर्व सेना वा प्रहरी अधिकारीहरु वा सैन्य तालिम लिएको २ उचाइ ५.७ इन्च ३ तौल ७५ किलो भन्दा बढी ४ अंग्रेजी दक्षता राम्रो भएको र प्लसटु पास गरेको ।
चयन प्रक्रिया रोयल गार्डको चयन प्रक्रिया तीन किसिमले गरिन्छ । पहिलो त शारीरिक परिक्षण, चिकित्सा परिक्षण जसमा तपाइको कुनै दृघरोगको परिक्षण गरिन्छ र अन्तिम अन्तर्वार्ता लिइन्छ ।
Previous आमालाई मा’र्न भिरको टुप्पोमा पुर्याएपछि आमाले भनिन् :छोरा तिमी फर्कने बाटो अफ्ठेरो छ, नलडी जानु है ! एक पटक अवश्य पढ्नुहोस्
Next किन विश्वकै २ ठूला प्रशान्त महासागर र आन्ध्र महासागर एकआपसमा भेटिँदा पानी मिसिँदैन ?
काठमाडौं – बिहिबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । बुधबार तोलामा ९ सय रुपैयाले …